Ụbọchị My Pet » Olee otú na-Ụbọchị-Sexy Iji gị ise enwe Uche Ziri
emelitere ikpeazụ: Sep. 24 2020 | 2 min agụ
The echiche maka a sexy nwaanyị a pin-up girl na crazy arụchi yi obere a ole na ole iberibe uwe. Otú ọ dị, e nwere ihe ọzọ ịbụ sexy karịrị nnọọ baring akpụkpọ na-enwe n'úkwù, ara, na n'úkwù a nlereanya. Mgbe ha na-ekwu na ihe ị na-eche na-aghọ gị, ha nri. Ọ bụrụ na ị na-eche jọrọ njọ, gị ahu nēche njiko n'ime a ụta na gị isi ike ikwe na ihere ụzọ, eleghị anya agbalị izochi ihu gị. Ma mgbe ị na-eche na ị mara mma na sexy, gị postcho dị mma, ị na-eje ije ọzọ obi ike na-, na ị na-enwetaghị ihe anya. Ya mere, olee otú otu onye na-aghọ sexy tupu a ụbọchị? Dị Mfe. Ka gị ise uche ziri ezi na-arụ ọrụ n'ihi na ị.
Dị ka okwu na-aga “n'anya bụ windo nke mkpụrụ obi”. Direct anya pụrụ ịbụ nnọọ dị ike ka mma eme ka n'aka gị peepers bụ sexy iji ekporopụ na. Ewepụtụ gị na iku anya na wepụ ihe ọ bụla kpafuo ntutu. Ụzọ a, gị ụbọchị agaghị mgbe na-achọ ime ya anya gị nke.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ sexy, i wee na-esi isi sexy. Ịhọrọ a na-esi ísì pụrụ ịbụ nnọọ ihe ịma aka. Ọ bụrụ na ị bụ na a ahịa nwalee ụfọdụ fragrances, jide n'aka na ị na-agaghị yi ọ bụla. Ụzọ a, ị pụrụ n'ezie na-na isi ị na-agbalị, si otú, na-eme ka ọ dịrị ya mfe ikpebi na a na-esi ísì. Ọzọkwa, adịghị douse onwe gị na ukwuu tupu a ụbọchị. Ịgba zuru ezu na gị ụbọchị ga-enwe ike bulie gị senti si gafee table, bụghị gafee ụlọ.
Otu nke na-ewu ewu aphrodisiacs bụ oporo. More karịa ya ike na-amụba mmekọahụ mbanye, ụfọdụ ụdị nwere ọtụtụ zinc, nke bara uru maka ndị mmadụ na mmanu mmanu akpụkpọ. Ọzọ sexy na ihunanya na-emeso gị echiche nke uto dị strawberries. Ọ bụghị nanị na ọ bụ a sexy mkpụrụ iri na chocolate, Ọ na-enyere whiten ezé gị n'ihi na a sexy ọnụ ọchị gị na ụbọchị ga-enwe ike iguzogide.
Music bụ oké ụzọ ka mmadụ na ọnọdụ. E nwere songs na-eme ka ị na-aga site na “girl ụzọ na-esote” ka “sultry mmekọahụ chi nwaanyị”. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe mmezi agbam ume na-enye gị ezuru obi ike tupu mụ ahụ gị ụbọchị, na-ege ntị songs dị ka “Anụ ntị Girl "site Beyonce, “Bọtịnụ” site pussycat dolls, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eweta gị n'ime chi nwaanyị si.
More karịa a sexy ahu, ọ dị mkpa ka nwere sexy akpụkpọ. Idebe akpụkpọ gị hydrated dị oké mkpa iji nọgide na ya supple na juu na aka. -Aṅụ nza na mmiri na mgbe ide ude mmiri mgbe gị na bath. Ọ dịghị ihe na sexy banyere akọrọ, chaffed akpụkpọ.
Atọ Atụmatụ maka Online dịwara Ịga nke Ọma